Faraday tsy tapaka: ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny vidin'ny herinaratra | Fitaovana maimaim-poana
Isaac | 17/09/2021 09:00 | fampianarana
Toy ny tamin'ny fotoana hafa dia naneho hevitra momba ireo fanontaniana lehibe hafa eo amin'ny sehatry ny elektronika sy ny herinaratra isika, toy ny Lalàn'i Ohm, onja Ny lalàn'i Kirchoff, ary na dia ny karazana boribory mandeha amin'ny herinaratra ifotony, mety hahaliana ihany koa ny fahalalana hoe inona izany Faraday tsy miova, satria afaka manampy anao hahafantatra bebe kokoa momba ny enta-mavesatra izy io.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho azonao tsara kokoa inona no fahasambarana tsy tapaka, inona no azo ampiharana azy, ary ahoana ny fanisana azy ...
1 Inona no tsy miova amin'ny Faraday?
1.1 Inona no mole?
1.2 Inona ny vidin'ny herinaratra?
2 Fampiharana tsy tapaka an'ny Faraday
3 Inona no atao hoe electrolysis?
Inona no tsy miova amin'ny Faraday?
La Faraday tsy miova izy io dia be mpampiasa tsy tapaka amin'ny sehatry ny fizika sy ny simia. Izy io dia nofaritana ho toy ny habetsaky ny herinaratra isaky ny mol ny elektrôna. Ny anarany dia avy amin'ny mpahay siansa anglisy Michael Faraday. Ity tsy miova ity dia azo ampiasaina amin'ny rafitra elektrokimika mba hikajiana ny habetsaky ny singa miforona ao anaty electrode.
Afaka misolo tena azy ny taratasy F, ary faritana ho toy ny molar elemental charge, afaka kajy toy ny:
maha F ny sanda vokatr'izany ny Farday ny tsy miova, e ny elatra elektrika singa, ary ny Na dia tsy tapaka Avogadro:
Araka ny SI, ity faraday Faraday ity dia marina, toy ny Constant hafa, ary ny sandany marina dia: 96485,3321233100184 C / mol. Araka ny hitanao dia aseho ao amin'ny singa C / mol, izany hoe, coulombs isaky ny mol. Ary mba hahalalana hoe inona ireo singa ireo, raha mbola tsy fantatrao dia azonao atao ny manohy mamaky ireo fizarana roa manaraka ...
Inona no mole?
Un Mol dia singa iray mandrefy ny habetsaky ny akora. Ao anatin'ny singa SI, dia iray amin'ireo habetsaky ny 7 fototra izy io. Amin'ny singa rehetra, na singa izany na singa simika, dia misy andiana singa singa mandrafitra azy. Mole iray dia mitovy amin'ny 6,022 140 76 × 1023 sampana ambaratonga voalohany, izay sandan'ny isa tsy miovaova amin'ny faharetan'ny Avogadro.
Ireo singa ara-pototra ireo dia mety ho atôma, molekiola, ion, elektrôna, fotôna, na karazana poti-javatra hafa. Ohatra, afaka manao izany ianao kajy ny isan'ny ataoma inona no ao anaty grama misy akora omena.
Ao amin'ny Simia, ny mole no ifotony, satria mamela kajy maro hatao amin'ny firaketana, ny valin'ny simika, sns. Ohatra, ho an'ny rano (H2O), manana fihetsika ianao 2 H2 + O2 → 2 H2O, izany hoe ilay hidrôzenina roa molotra (H2) ary oxygen mole iray (O2) mihetsika mamorona rano roa mol. Ankoatr'izay, izy ireo koa dia azo ampiasaina hanehoana fifantohana (jereo ny molarity).
Inona ny vidin'ny herinaratra?
Etsy ankilany, avy amin'ny fiampangana herinaratra Efa niresaka tamin'ny fotoana hafa isika, fananana ara-batana amin'ny vongan-tsiranoka subatomika sasany izay maneho hery manintona sy maharikoriko eo anelanelany noho ny saha elektromagnetika. Ny fifandraisana elektromagnetika, eo anelanelan'ny fiampangana sy ny sehatry ny herinaratra, dia iray amin'ireo fifandraisana ifotony 4 amin'ny fizika, miaraka amin'ny hery nokleary mahery, ny hery nokleary malemy ary ny hery misintona.
Mba handrefesana io sarany herinaratra io, ny Coulomb (C) na Coulomb, ary faritana ho toy ny habetsaky ny fiampangana entina ao anatin'ny iray segondra amin'ny alàlan'ny herinaratra misy heriny iray ampere.
Fampiharana tsy tapaka an'ny Faraday
Raha manontany tena ianao hoe fampiharana azo ampiharina Azonao atao ny manana io Faraday tsy tapaka io, ny tena izy dia manana vitsivitsy ianao, ohatra sasany dia:
Fanamafisana / fanodinana herinaratra: ho an'ny fizotran'ny indostrian'ny metalurgique izay misy vy iray manarona iray hafa amin'ny alàlan'ny electrolysis. Ohatra, rehefa vita amin'ny vy ny metaly vy mba hanome fanoherana bebe kokoa ny harafesiny. Amin'ireto dingana ireto, ny metaly ho ampirinaina dia ampiasaina ho toy ny anode ary ny electrolyte dia sira mety levona amin'ny fitaovana anode.
Fanamasinana vy: azo ampiharina amin'ny raikipohy ampiasaina amin'ny fanatsarana metaly toa ny varahina, zinc, tin, sns. Amin'ny alàlan'ny fomba elektrôlisis koa.
Famokarana simika: hamokarana volo simika dia ampiasaina foana io tsy tapaka io.
Famakafakana simika: amin'ny alàlan'ny herinaratra dia azo hamarinina ihany koa ny firafitry ny simika.
Famokarana entona: ny gazy toy ny oxygen na hidrogen izay azo avy amin'ny rano amin'ny alàlan'ny electrolysis dia mampiasa io tsy tapaka io koa ho an'ny kajy.
Fitsaboana sy hatsaranaNy elektrolisisma dia azo ampiasaina hanentanana ny hozatra sasany na hitsaboana olana sasany, ankoatry ny fanesorana ny volo tsy ilaina. Raha tsy nisy ny tsy tapaka, fitaovana marobe amin'ity karazana ity dia tsy azo namboarina.
printy: Ho an'ny mpanonta, ny fizotran'ny electrolysis dia ampiasaina amin'ny singa sasany.
Capacitor electrolytic: singa elektronika fanta-daza iray misy sarimihetsika manify misy oksida aluminium ary anode aluminium eo anelanelan'ny elektrôtra. Ny electrolyte dia fangaro asidra borika, glycerine ary amonium hidroksida. Ary toy izao no ahatratrarana ireo fahaiza-manao lehibe ...
Inona no atao hoe electrolysis?
Ary satria ny faritr'i Faraday dia mifandray akaiky amin'ny herinaratraAndao hojerentsika hoe inona io teny hafa io izay ampiasaina betsaka amin'ny indostria. Noho io fizotrany io dia azo sarahina amin'ny alàlan'ny herinaratra ny singa iray amin'ny fitambarana. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny famoahana ny elektrôna amin'ny alàlan'ny anode anions (oxidation) ary ny fisamborana electrons amin'ny cathode cations (fihenam-bidy).
Tsy nahy an'i William Nicholson, tamin'ny taona 1800, raha nandinika ny fandefasana bateria simika izy io. Tamin'ny 1834, Michael Faraday namolavola sy namoaka ny lalànan'ny herinaratra.
Ohatra, ny electrolysis an'ny rano H2O, mamela hamorona oksizena sy hidrogen. Raha misy onja mivantana ampiharina amin'ny alàlan'ny electrodes, izay hampisaraka ny oxygen amin'ny hidrogen, ary hahafahana mitoka-monina ireo gazy roa ireo (tsy afaka mifandray izy ireo, satria mamorona réaction explosive tena mampidi-doza).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » fampianarana » Faraday tsy tapaka: ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny vidin'ny herinaratra